बस कन्डक्टरका छोरा राज कुन्द्रा: जसको नेपालले फेरिदिएको थियो भाग्य ! - Khabar Nepali
होमपेज / मनोरञ्जन / बस कन्डक्टरका छोरा राज कुन्द्रा: जसको नेपालले फेरिदिएको थियो भाग्य !
बस कन्डक्टरका छोरा राज कुन्द्रा: जसको नेपालले फेरिदिएको थियो भाग्य !
मुम्बई प्रहरीले शिल्पा शेट्टीका श्रीमान् तथा कारोबारी राज कुन्द्रालाई प क्राउ गरेको छ । उनलाई पो-र्नोग्राफिक फिल्म बनाएको र त्यसलाई सार्वजनकि गरेको आरोपमा प क्राउ गरिएको छ । मुम्बई क्राइम ब्रान्चमा फेब्रुअरी सन् २०२१ मा एक आ-रोप दर्ता भएको थियो । यसको अनुसन्धान गर्ने क्रममा सोमबार राज कुन्द्रालाई प क्राउ गरिएको हो । प्रहरीले राज कुन्द्रा यसमा समावेश भएको कुरामा पर्याप्त प्रमाण भएको दाबी गरेको छ ।
यसै वर्ष फेब्रुअरीमा मुम्बई प्रहरीले एक समूह गठन गरेर ग्रीन पार्क बंगलामा छापमा मा-रेको थियो । प्रहरीले यो कारवाही त्यहाँ पो-र्न फिल्मको सुटिङको सूचना पाएपछि गरेको थियो ।
यतिबेला प्रहरीले पाँचजनालाई प क्राउ गरेको थियो र एक युवतीलाई रिहा पनि गरिएको थियो । प क्राउ परेका पाँच जनामध्ये दुई अभिनेता र दुई युवती समावेश थिए ।
सन् २००४ मा ‘सक्सेज’ पत्रिकाले उनलाई बेलायतको सबैभन्दा धनाढ्य एशियाली मूलका व्यक्तिको सूचीमा १९८ औं स्थानमा राखेको थियो । २९ वर्षका राज त्यतिबेला यो सूचीमा समावेश हुने सबैभन्दा युवा व्यक्ति थिए । यसको तीन वर्षपछि सन् २००७ मा उनी आफ्नी जेठी श्रीमतीसँग अलग्गिएका थिए । त्यसपछि उनको भेटघाट शिल्पा शेट्टीसँग भयो जो त्यतिबेला बिग ब्रदर टिभी शोमा भाग लिनका लागि लण्डन पुगेकी थिइन् । उनीहरु क्रमशः नजिकिँदै गए ।